ခြေထောက်က သွေးကြောထုံးတွေ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
သွေးကြောထုံးတွေဆိုတာ အရေပြားအောက်က မြင်နေရတဲ့ လိမ်ကောက်ပြီး ရောင်နေတဲ့ သွေးကြောအကြီးကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ခြေထောက်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတလေ နာတတ်ပြီး သွေးခဲတွေ၊ အနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
>> ဘယ်လို ဖြစ်ရတာလဲ?
သွေးပြန်ကြောလေးတွေရဲ့နံရံမှာ သွေးတွေ နောက်ပြန်စီးဆင်းတာကို ကာကွယ်တဲ့ အဆို့ရှင်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ အဆို့ရှင်တွေ ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် သွေးကြောလေးတွေ အားနည်းလာရင် ကျုံ့နိုင်၊ ဆန့်နိုင်စွမ်း မရှိတော့ဘဲ သွေးကြောက ကျယ်လာ၊ ကြီးလာပြီး သွေးတွေ နောက်ပြန်စီးကာ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ သွေးကြောထုံးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။
>> ဘာတွေကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲ?
● မိသားစုထဲမှာ ဖြစ်ဖူးတဲ့လူရှိရင် ကိုယ့်မှာဖြစ်ဖို့ ၅၀% လောက် ပိုများပါတယ်။
● အသက်ကြီးလာရင်လည်း အဆို့လေးတွေရဲ့ပုံစံ၊ လုပ်ငန်းတွေ ထိခိုက်တာမို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
● အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်၊ သွေးဆုံးချိန်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေကြောင့် အဖြစ်များပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ သန္ဓေသားကြောင့် သွေးကြောပေါ် ဖိအားသက်ရောက်တာကြောင့်လည်း သွေးကြောထုံးတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မွေးပြီး ၃ လကနေ ၁၂ လ အတွင်းမှာ ပြန်ကောင်းပါတယ်။
● အဝလွန်တဲ့လူတွေ၊ ထိုင်တာများတဲ့ လူတွေမှာလည်း သွေးလျှောက်တာနည်းလို့ အဖြစ်များပါတယ်။
● ဒဏ်ရာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် သွေးခဲကြောင့်လည်း အဆို့ရှင်လေးတွေ ပျက်စီးပြီး သွေးကြောထုံး ဖြစ်စေပါတယ်။
>> ရောဂါလက္ခဏာတွေက -
အရေပြားအောက်မှာ ခရမ်းရောင် သွေးကြောကြီးတွေ မြင်နေရပါတယ်။
တစ်ခါတလေမှာ နာတတ်ပါတယ်။ ကိုက်ခဲတာ၊ ခြေထောက်ကြီး လေးလံနေသလိုလည်း ခံစားရပါတယ်။ ရပ်တာ၊ ထိုင်တာ များရင် ပိုနာလာတတ်ပြီး ခြေထောက်ရောင်လာတာ၊ ကြွက်တက်တာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အရေပြားတွေ ယားယံပြီး အရောင်ပြောင်းလာတတ်ပါတယ်။
အရေးကြီးတဲ့ နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့က အရေပြား ယားယံ ရောင်ရမ်းတာ၊ သွေးကြောထဲ သွေးခဲပိတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
>> ရောဂါ ဘယ်လိုရှာဖွေမလဲ?
● စမ်းသပ်ကြည့်ရုံနဲ့တင် သိနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ရောဂါရာဇဝင်၊ ခံစားရတာတွေ မေးပါလိမ့်မယ်။
● တစ်ခါတလေ လိုအပ်ရင် တီဗီဓာတ်မှန်ရိုက်ပြီး အဆို့ရှင်တွေ ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ၊ သွေးခဲ ရှိ မရှိကို ရှာဖွေလို့ ရပါတယ်။
ရောဂါ သိပ်မဆိုးရင် နေထိုင်စားသောက်ပုံကို ပြောင်းလဲပေးရပါတယ်။
● အကြာကြီး ရပ်တာ၊ ထိုင်တာ၊ ခြေထောက်ချိတ်ပြီး အကြာကြီး ထိုင်တာကို ရှောင်ရပါမယ်။ အိပ်တဲ့အခါ ခြေထောက်ကို အပေါ်မြှောက်အိပ် ရပါမယ်။
● သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းအောင်၊ ကြွက်သားတွေ သန်မာအောင် လေ့ကျင့်ခန်း မှန်မှန် လုပ်ပေးရပါမယ်။
● ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ရမယ်။
● အရမ်းကျပ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ မဝတ်ပါနဲ့။
● ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် မစီးပါနဲ့။
● ဆေးတိုက်တာ၊ ဆေးထိုးတာ နောက်ဆုံး လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်တာမျိုး အထိ လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
Dr. Htar (www.drmyanmar.com)
၂၆.၁ဝ.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးဟာ ဦးနှောက်ကနေ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးသို့ သွယ်တန်းနေသော အာရုံကြောမျှင်များစွာ စုဝေးနေသောအာရုံကြောတိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကျောရိုးအာရုံကြောမကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရပါက စုတ်ပြဲခြင်း၊ သွေးခြေဥခြင်းသို့မဟုတ် လုံးဝပြတ်တောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေမှာ ကျောရိုးအာရုံကြောမဒဏ...
ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းဟာ အဖြစ်များသော ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး စောစီးစွာ မကုသဘူးဆိုပါက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိပါတယ်။
ဆီးထဲတွင်ရှိသော သတ္တုဓာတ်အနည်များနှင့် ဆားဓာတ်များ စုစည်းပေါင်းစပ်ရာကနေ ကျောက်တည်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ကျောက်တည်ခြင်းကို ဖြစ...